मेरी बास्सैका चर्चित कलाकार सुरबिर पण्डित दाह्रीलाई के भयो ? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / मेरी बास्सैका चर्चित कलाकार सुरबिर पण्डित दाह्रीलाई के भयो ?
admin June 16, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 261 Views
मेरी बास्सैका चर्चित कलाकार सुरबिर पण्डित दाह्री नेपालका चर्चित मध्येका एक पाका कलाकार हुन् । पाका कलाकार सुरबिर लामो समयदेखि मेरी बास्सैमा आवद्ध छन् । उनले अभिनय गरेको पछिल्लो शृखलामा सुरबिरको निधन भएको दृश्यलाई देखाइएको छ ।
कुनै पनि कम्पनी राम्रा हुन् या नराम्रा ती कम्पनीको बिश्लेषण गर्ने अधिकार स्वयम् नियामक निकायहरूलाई हुने गर्छ। तर त्यसलाई न का रात्मक असर गर्ने गरि सार्वजनिक गर्ने अधिकार बोर्डलाई हुदैन। नियामक निकायको स्वीकृति लिई नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम चलेका कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सूचिकृत अधिकार दिएको बोर्डले फेरि तिनै कम्पनीमा लगानी गर्दा होस पुर्‍याउनु पर्ने भन्नु आफैमा गलत देखिएको छ।
दोस्रो बजारमा निर्धारण हुने मूल्यले कम्पनीको नाफा घाटामा कुनै सम्बन्ध हुँदैन। सूचिकृत कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा कति मूल्य हुने भन्ने पनि कसैले निर्धारण गर्ने गर्दैन। दोस्रो बजारमा निर्धारण हुने मूल्यले शेयरको मूल्य निर्धारण हुने हो। जसले गर्दा कुनै पनि कम्पनीको मूल्य बढी भयो वा कम भयो भन्ने अधिकार समेत बोर्डलाई छैन। बजारमा माग र आपूर्तिले शेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने हो।
अर्को तर्फ जो खि म यु क्त कम्पनीबाट जो गाउनु बोर्डको आफ्नै कर्तव्य हो। लगानीकर्ताका लागि जो खि म युक्त कम्पनी भए बोर्डले नै सूचीकरणबाट हटाउन सक्छ। सूचीकरणमा राखी राख्ने अनि लगानीको लागि जोखिम भन्नु आफैमा गलत हो। संसारका कुनै पनि नियामक निकाय आफैले स्वीकृति दिएका कम्पनीमा लगानी गर्नु उचित हुँदैन भनेर भन्दैनन्। कानुनत भन्न पनि मिल्दैन। किनकि प्राकृतिक व्यक्तिलाई यो गर वा त्यो नगर भनेर निर्देशन दिनु पर्दैन। उसले कानुनले वर्जित गरेका बाहेकको सबै काम गर्न सक्छ।
Previous इन्द्रावती नदी किनारमा भेटियो सात शव, ६ जनाको पहिचान खुल्यो
Next राउटे सम्झना शाहीले खाना पकाउदै गरेको भिडियो बन्यो भाइरल, युटुबमा १८ लाख भन्दा बढिले हेरे (भिडियो हेर्नुस्)